Nehemia 12 - Ny Baiboly
Nehemia toko 12
Fanisana ny mpisorona sy levita mbamin'ny filohany - Fitokanana ny mandan'i Jerosalema.
1Izao no mpisorona sy levita niara-niverina tamin'i Zorobabela, zanak'i Salatiela sy Josoe:
Saraiasa, Jeremia, Esdrasa, 2Amariasa, Melòka, Hatosa, 3Sebeniasa, Rehoma, Merimota, 4Adao, Gentona, Abiasa, 5Miamina, Maadiasa, Belgà, 6Semeiasa, Joiariba, Idaiasa, 7Seloma, Amòka, Helkiasa, Idaiasa. Ireo no lehiben'ny mpisorona mbamin'ireo rahalahiny, tamin'ny andron'i Josoe. 8Levita: Josoe, Benoì, Kedmiela, Sarebiasa, Jodà, Mataniasa, izay nitarika ny hira fiderana, niaraka tamin'ireo rahalahiny; 9Bekbekiasa sy Ani, rahalahin'ireo kosa no antokom-pihira nifamely tamin'ireo, tamin'ny fanompoana.
10Josoe niteraka an'i Joakima, Joakima niteraka an' i Eliasiba, Eliasiba niteraka an'i Joiadà, 11Joiadà niteraka an'i Jonatana, ary Jonatana niteraka an'i Jedoà.
12Izao no mpisorona avy amin'i Saraiasa: Anania avy amin'i Jeremia; 13Mosolama avy amin'i Esdrasa; Johanàna avy amin'i Amariasa; 14Jonatana avy amin'i Melòka; Josefa avy amin'i Sebeniasa; 15Ednà avy amin'i Haràma; Helkì avy amin'i Maraiota; 16Zakaria avy amin'i Adao; Mosolama, avy amin' i Gentona; 17Zekrì avy amin'i Abiasa; Feltì avy amin'i Miamina, sy Moadiasa; 18Samoa avy amin'i Belgà; Jonatàna avy amin'i Semeiasa; 19Matanai avy amin'i Joiariba; Ajì avy amin'i Jodàiasa; 20Kelai avy amin'i Selai; Hebera avy amin'i Amòka; 21Hasabiasa, avy amin'i Heliasa; Natanaela avy amin'i Idaiasa.
22Tamin'ny andron'i Eliasiba, Joiadà, Johanàna, ary Jedoà, dia voasoratra avokoa ny levita loham-pianakaviana sy ny mpisorona, tamin'ny nanjakan'i Dariosa ilay Persa. 23Voasoratra ao amin'ny boky tantara, ny taranak'i Levì, loham-pianakaviana, hatramin'ny andron'i Johanàna, zanak'i Eliasiba. 24Lohan'ny levita: Hasebiasa, Serebiasa, ary Josoe, zanak'i Kedmiela, niandraikitra niaraka tamin'ireo rahalahiny nifanandrify aminy, ny fankalazana sy ny fiderana an'Andriamanitra; araka ny nandaharan'i Davida olon'Andriamanitra an'izany: nanao antokony roa mifamaly. 25Ny mpiandry varavarana, niambina teo amin'ny tokonam-bavahady kosa, dia Mataniasa, Bekbekiasa, Abdiasa, Mosolama, Telmona, ary Akoba. 26Ireo izy no tamin'ny andron'i Joakima, zanak'i Josedeka sy Nehemia governora, ary Esdrasa mpisorona sy mpanora-dalàna.
27Nony notokanana ny mandan'i Jerosalema dia nantsoina tany amin'izay fitoerana nonenany rehetra tany, ny levita, nasaina tonga any Jerosalema hanao ny fitokanana amin-kafaliana, amin'ny hira amam-piderana, amin'ny feon-kipantsona sy valiha ary harpa. 28Nivory ny zanaky ny mpihira, avy eny ambanivohitra manodidina an'i Jerosalema, avy any an-tanànan'ny Netofatiana, 29sy Bet-Galgala, ary ny faritanin'i Geba sy Azmaveta; fa nanao vohitra ho azy teny amin'ny manodidina an'i Jerosalema ny mpihira. 30Rahefa avy nanadio ny tenany, ny mpisorona sy ny levita, dia nanadio ny vahoaka sy ny vavahady ary ny manda koa.
31Nasaiko niakatra teny ambonin'ny manda ireo mpanapaka an'i Joda, ary nalahatro ho antokony roa lehibe ny mpihira manao prosesiona.
Ny antokony voalohany, nandeha teny ambonin'ny manda, amin'ny ilany havanana, ho eo amin'ny vavahadin'ny Zezika. 32Ka ireto no nandeha teo aorian'ireo: Ozaiasa, sy ny antsasaky ny andriandahin'i Jodà, 33Azariasa, Esdrasa, Mosolama, Jodà, Benjamina, Semeiasa, ary Jeremia; 34ny sasany amin'ny taranaky ny mpisorona, nitondra trompetra: Zakaria zanak'i Jonatàna, zanak'i Semeiasa, zanak'i Mataniasa, zanak'i Mikea, zanak'i Zekora, zanak'i Asafa, 35mbamin'ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon'i Davida, olon'Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an'ireo. 36Tao amin'ny vavahadin'ny Loharano izy ireo, dia niakatra ny ambaratongan'ny tanànan'i Davida, teo an-tandrifiny, nihazo ny fiakarana amin'ny manda, eo ambonin'ny manda, eo ambonin'ny tranon'i Davida hatreo amin'ny vavahadin'ny Rano, eo atsinanana. 37Ny antokom-pihira faharoa kosa, nandeha tamin'ny ilany iray, ka izaho sy ny antsasaky ny vahoaka no teo aorian'io teny ambony manda. Avy eo amin'ny tilikambon'ny Fatana fandoroana, dia nandroso hatreo amin'ny manda malalaka, 38dia avy teo ambony vavahadin'i Efraima, teo amin'ny vavahady Goga, teo am-bavahadin'ny Hazandrano, teo amin'ny tilikambon'i Hananeela, sy ny tilikambon'i Meà, hatreo amin'ny vavahadin'ny Ondry; ary teo amin'ny vavahadin'ny Tranomaizina no nijanona. 39Dia samy nijanona tao an-tranon'Andriamanitra ny antokom-pihira roa tonta, mbamin'izaho sy ny antsasaky ny andriam-baventy niaraka tamiko, 40ary koa ireo mpisorona: Eliasima, Maasiasa, Miamima, Mikeà, Elioenai, Zakaria, Anania, nitondra trompetra, 41sy Maasiasa, Semeiasa, Ajì, Johanàna, Melkiasa, Elama, ary Ezera. Dia injay, niredona ny mpihira mbamin'i Jezraiasa mpifehy azy.
42Sorona maro no naterin'izy ireo, tamin'izay andro izay, ary fifaliana no nimasoany fa antom-pifaliana lehibe no nomen'Andriamanitra azy ireo. Nifaly mbamin'ny zaza amam-behivavy, ka re lavitra ny hobin-kafaliana tao Jerosalema.
43Tamin'izany andro izany, dia notendrena ny olona hitandrina ny efi-trano fitehirizana, hasiana ny fanatitra voatokana, ny voaloham-bokatra, ny fahafolon-karena; ary nasaina nangonin'izy ireo, avy any amin'ny faritanin'ny isan-tanàna, ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita voadidin'ny lalàna, fa nahafaly an'i Jodà ny nahita ireo mpisorona sy levita, samy eo amin'ny anjara toerany avy, 44nitandrina ny zavatra rehetra momba ny fanompoana an'Andriamaniny sy ny momba ny fanadiovana; torak'izany koa ireo mpihira sy mpiandry varavarana, araka ny nandaharan'i Davida sy Salomona zanany. 45Fa fahiny, tamin'ny andron'i Davida sy Asafa, lehiben'ny mpihira, dia fanao ny manao hira fiderana amam-pisaorana ho fankalazana an'Andriamanitra. 46Tamin'ny andron'i Zorobabela sy Nehemia, Israely rehetra dia manome isan'andro ny anjaran'ny mpihira sy ny mpiandry varavarana. Nomena ny levita ny fanatitra masina, dia ny levita kosa indray no nanome ny anjaran'ny taranak'i Aarona. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0821 seconds